San Fermín de los Navarros nekereke yayo | Bezzia
San Fermin weNavarrese
Susana godoy | 17/06/2022 12:00 | famba
Kana tichitaura nezveSan Fermín de los Navarros, saka tinofanira kutaura nezveChechi. Nokuti ndiyo imwe yetemberi yakanzi 'Asset of Cultural Interest', kare mumakore ekuma 90. Nokudaro, kana iwe usati wawana mukana wekuitarisa, inguva yekuzvirega iwe uchitakurwa. nazvo.
Ndokusaka tauya kuzokuudza kuti ungasvika sei kwairi uye nezvese zvaunoda kuziva nezve chechi yakaita seSan Fermín de los Navarros. nokuti dzimwe nguva tine nzvimbo dzinoshamisa dziri pedyo kupfuura zvatingafungidzira. Zvinoita sekuti nzvimbo iyi ndeimwe yavo uye, chokwadi, iwe uchaida kana iwe uine pamberi pako.
1 kereke iripiko
2 Nzira yekusvika sei kuSan Fermín de los Navarros
3 nhoroondo yekereke
Zvinofanira kutaurwa kuti chechi yeSan Fermín de los Navarro iri muChamberí. Iyi ndiyo imwe yematunhu eMadrid iyo yakarongeka kuita nharaunda 6 uye unovawana vari pakati pechikamu. Ndiyo imwe yenzvimbo iyo inogona kutaurwa kuti kune yakawanda kupfuura yakawanda yekuvaka musanganiswa. Nekuti mairi iwe uchaona kuti kune sei zvivakwa zvemazuva ano asiwo neo-Gothic pamwe neo-Mudejar. Mubatanidzwa waunokwanisa kuwana nhanho nhanho pakati pedzimba asiwo pakati pezvivakwa zvakakosha zvenzvimbo. Nokudaro, hazvishamisi kuti mazhinji acho akaziviswa sezviyeuchidzo zvenyika. Pakati pavo pane chechi iyo nhasi ine nyeredzi munzvimbo yedu asiwo zvikoro zvakati wandei, nzvimbo dzekupotera nemakongiresi.
Nzira yekusvika sei kuSan Fermín de los Navarros
Paunenge wava paairport uye paT4, iwe unosvika mukati memaminitsi makumi mapfumbamwe nebhazi. Ehe, kana iwe uri munzvimbo yepaki yekunakidzwa, iwe unongova nemaminitsi makumi mana nematanhatu pamberi pako. Ndicho chikonzero mabhazi anoenda kunzvimbo iyi ari 46, 147, 150 uye 16. Kunyange zvazvo zvakakodzera nguva dzose kutarisa mberi, kana pane shanduko mune rwendo.
Kana iwe uchida kuenda nechitima, saka kubva kuMadrid airport kuenda kuchechi kune anenge 48 maminetsi. Kubva munzvimbo yeAlcampo inongopfuura maminetsi makumi mashanu nematanhatu. Chitima cheC56 neC10 ndicho chichakuendesa kwauri kuenda. Chokwadi, sezvatataura, padzimwe nguva pangava nebasa rakawanda kana kuti ringaderedzwa uye kuri nyore kunzvera rudungwe kuti usaramba uri pasi. Nzvimbo dzepedyo dzekumira kwatiri kuenda iRubén Darío, Almagro, Colón, Castellana kana Gregorio Marañón. Kubva kwavari kuenda kuchechi pane kungofamba maminitsi matatu chete.
Zvinonzi yakaumbwa nekuda kweboka reNavarrese vaigara muMadrid uye vaiva nekuzvipira kwakasimba kuSan Fermín. Nekudaro, wega waChikunguru 7 vaigara vachisangana, saka vanosarudza kugadzira nzvimbo yakatarwa mushure mekutenderera kakawanda. Sezvo muna 1684 ndipo pavanogadzira ungano asi hazvizove kusvika 1746 apo kereke yekutanga yeNavarros inovakwa pavanowana pekugara kwekuverenga kweMonterrey. Chokwadika, imwe nguva gare gare yakaparadzwa. Imwe nguva gare gare, muna 1886, chechi yatinoziva nhasi yakavakwa.. Chechi iyi inotora chikamu chepakati uye kune rumwe rutivi, kune nzvimbo dzebindu. Mavari pavilions yeparutivi inogona kuonekwa.
Kune nzvimbo yekunze, unogona kuona kuti zvidhinha ndiyo protagonist, iyo inotitungamirira kuti titaure pamusoro pemari yayo yakaderera asiwo kuvaka kwayo nokukurumidza. Asi mukati megothic style ichave iripo, ine nave nhatu uye vault ine nyeredzi. Iyo May altarpiece yakagadzirwa muzana remakore rechiXNUMX uye girazi mumahwindo rinomiririra jasi remaoko eNavarra. Saka, pane zvese izvi nezvimwe, yave nguva yekumira panzvimbo yakadai. Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » famba » San Fermin weNavarrese
Matanda akafumurwa anowedzera hunhu kukicheni yako
musanganiswa weH&M maketeni ausingakwanise kupotsa